भानु चोक कि घोराही चोक ?, यो सहमति गरेर समाधान भइहाल्ने विषय हो : नगर प्रमुख चौधरी – Kanika Khabar
भानु चोक कि घोराही चोक ?, यो सहमति गरेर समाधान भइहाल्ने विषय हो : नगर प्रमुख चौधरी
Kanika Khabar २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १२:१८ June 26, 2020 मा प्रकाशित
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नंं १५ मा अवस्थित मुख्य चोकको नामाकरणको विषयमा अहिले ‘माग –बहस’ चलिरहेको छ । केही वर्ष पहिले भानु चोक नामाकरण गराइएको यस चोकको नाम ‘नामाकरण’ भन्दा चल्तीको नाम ‘तुलसीपुर चोक’ ले चिनिन थाल्यो । निर्णय भए पनि चलन चल्तीमा ल्याउन सकिएन । तुलसीपुर चोककै नामबाट चिनिदै आयो ।
केही महिना अगाडि अर्थात् गत माघ १७ गते पत्रकार किशोरचन्द्र गौतमले सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई उठाए । गौतमले नेपाली भाषा र आदिकविको सम्मान गर्न अनुरोध भन्दै आफ्नो स्टाटस सार्वजनिक गरेका थिए । ‘‘थारू संस्कृतिसंग अभिन्न रूपले जोडिएको जोडी घोडा घोराहीको पहिचानसँग पनि जोडेर ट्राफिक चोकमा स्थापना सकारात्मक नै लागेको छ । ठाउँ र दाङका मूल निवासीको संस्कृतिको पनि सम्मान भएको छ । तर घोराहीकै अर्को चोक तुलसीपुरचोकमा पनि अर्को उस्तै एउटा घोडा राख्ने कुरामा पुनर्विचार गरियोस् । पुरानो नाम ‘भानु चोक’ भएकाले आदिकविको शालिक उपयुक्त हुन्छ । यसबाट हाम्रो समाज भौतिक विकास मात्र होइन भाषा संस्कृतिप्रति संवेदनशील भएको देखिनेछ । निर्णयकर्ताहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । इगो फालेर गम्भीरतापूर्वक सोचिदिनुस् ।
नेपाली भाषाप्रतिको सम्मान गर्दै आदिकविलाई स्थापित गराँै । राप्ती साहित्य परिषद, लेखक संघ सम्बद्ध एवम् अन्य साहित्यकार लेखकहरू सबैले अनुरोध गर्ने हो कि ? दुईवटा चोकमा घोडामूर्तिको पुनरावृत्ति किन ?झन् झुक्याउने जस्तो भयो । आदिकविप्रति यस्तो असहिष्णुता नदेखाऔँ । द्वेष,आग्रह र घृणाको खेतीले हामी सबैको अहित गर्ने हो । सबै भाषा संस्कृति सम्मानित बनून् हाम्रो समाजमा । शान्त मनले सोचौ र निर्णय गरौ मेयर, उपमेयर अध्यक्षज्यूहरूमा विनम्र निवेदन छ ।’’ गौतमको स्टाटसमा लेखिएको थियो । यो स्टाटसले त्यतिबेला सोचेबमोजिम सम्वन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गराउन सकेन । यद्यपि यो दवावका लागि भन्दा पनि सचेतताका लागि लेखिएको थियो । सकारात्मक तथा रचनात्मक कार्यका लागि सोचनीय थियो ।
झण्डै चार महिनापछि अहिले यो विषय बहसका रुपमा आएको छ । दाङमा साहित्यिक संघ संस्था तथा स्रष्टाहरुले विज्ञप्ति मार्फत यो विषयलाई पुनः उठान गरेका छन् । यही जेठ २७ गते साहित्यिक संस्था र स्रष्टाहरुले चोकको नामाकरण ‘भानु चोक’ गरी आदिकवि भानुभक्तको सालिक राख्न अनुरोध गरेको थिए । २६ गते सोमबार वडा नं. १५ मा रहेका भानु टोल विकास संस्था, गौतम बुद्ध टोल विकास संस्था र नयाँ सडक टोल विकास संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन् । त्यसको लगत्तै नागरिक समाज दाङले विज्ञप्ति जारी गरी भानु चोक नामाकरणलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
यज्ञ बहादुर बुढाथोकी ( हाल स्वर्गीय) नगर प्रमुख भएको बेला ०५१ मा नै यस चोकको नाम भानु चोक राख्ने भनेर निर्णय भइसकेको थियो । त्यतिबेला त्रिभुवन नगर जेसिज लगायत अन्य संघसंस्थाको कार्यदल बनाएर विभिन्न चोक र सडकको नामाकरण लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । त्यति नै बेला यस चोकको नाम भानु चोक सिफारिस भएको र नगरपालिकाबाट निर्णय पनि भइसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी तत्कालीन त्रिभुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमर बहादुर डाँगी (हाल प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश नं. ५) को समयमा पनि यस चोकको नाम भानु चोक राख्ने भनेर पुनः निर्णय भएको छ । डाँगीले कनिका खबरसँगको संवादमा भने, ‘‘०५६÷०५७ तिर म नगर प्रंमुख भएको बेलामा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर यो चोको नाम नामाकरण ‘भानु चोक’ गरिएको हो । अब पुनः यसको फरक नामाकरण गर्न आवश्यक छैन । यो चोकको पहिले नै नामाकरण भएकाले त्यही नामले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ र पाउँछ पनि ।’’
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले इतिहासलाई मेट्न नहुने, इतिहास इतिहास नै रहन्छ र इतिहासलाई संरक्षण गरेर राख्नपर्ने बताए । कनिका खबरसँगको संवाददमा उनले भने, ‘‘भानु चोक नाामाकरण कुनै नयाँ एजेन्डा होइन, यो पुरानो नाम हो । यसको नामाकरण भइसकेको छ । यसको नाम परिवर्तन गरेर नयाँ नाम राख्ने निर्णय गरिनु दुःखद् कुरा हो, नयाँ नाम नयाँ एजेन्डा हो । भानु चोक निर्णय भइसकेको नाम हो यसलाई परिवर्तन गर्नु इतिहासको अपमान हो ।’’
घोराही उपमहानगरपालिकाको गत फागुन ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले यस चोकको नाम घोराही चोक राख्ने निर्णय गरेको हो । साथै यस चोकमा घोडाको प्रतिमा पनि राख्ने भनेर निर्णय भइसकेको छ र प्रतिमा पनि तयार भइसकेका छन् । अब पुरानो नामले नै निरन्तरता पाउँछ या पछिल्लो निर्णयले भन्ने सन्दर्भमा कनिका खबरसँगको संवादमा नगर प्रमुख नरुलाल चोधरीले सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन् । उनले भने, ‘‘अहिले यसबारे विवाद गर्नुपर्ने र बहस गर्नुपर्ने विषय नै छैन, मान्छेहरु किन त्यस्तो गरेका छन्, मलाई थाहा भएन ।’’ त्यसो भए यस चोको नाम भानु चोक हुने सम्भावना नभएको हो त भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख चौधरीले भने, ‘‘सम्भावना छैन भन्न मिलेन, सल्लाह गरेर जे पनि हुन सक्छ त्यहाँ । भानु चोक पनि हुन सक्छ, अरु चोक पनि हुन सक्छ । यसमा नगरपालिकाको छुट्टै भिजन, जनताको छुट्टै भिजन भन्ने हुँदैन, यो विवादको विषय नै होइन, सल्लाह सहमतिबाट यो विषय टुङ्गो लागिहाल्छ ।’’